Yega Handle Kicheni Faucet Ne Dhonza Pasi Spray chrome
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Faucets / WOWOW Imwechete Bata Kicheni Faucet Ine Dhonza Pasi Spray Chrome
WOWOW Imwechete Bata Kicheni Faucet Ine Dhonza Pasi Spray Chrome
Iyi tapini yekicheni yakakodzera kune zvekushambadzira uye zvekushandisa kumba.
Iyi yemhando yekicheni mapampu kudhira pasi ine chikamu chepamusoro chekunakisa kukwezva.
Dhonza kunze tapt inokwanisa kupa zvese kudzivirirwa uye kushongedza.
2310700C Kuiswa Mirayiridzo
Ikhitchini mixer tap chrome 2310700C
Kepeti yemusanganiswa wekicheni inongosanganisa mvura inopisa uye inotonhora. Iwe unogona kunyatso kusanganisa iyo miviri yemvura nzizi nenzira chaiyo maererano nezvavanoda. Kuti tikupe iwe chaiyo tembiricha yemvura yaunoda. Kusanganisa tembiricha yemvura kunogona kuitwa kamwe-neruoko nekicheni musanganiswa tap omuchina weWOWOW. Lever inongoshanda zvakanaka uye mvura inogona kudzorwa nyore. Izvo zviviri tembiricha uye yekumanikidza kwemvura pachayo. Iwe unozoona pakarepo kuti lever iyi inogadzirwa zvemhando yepamusoro zvinhu. Sezvo ichifamba zvakanaka, uye isina kana yekudzosera kumashure, iwe unoziva kuti iwe uno vimbiswa yehupenyu hwakareba kutsungirira.
Unogona kushandisa matatu mvura mvura uchisanganisa tembiricha yemvura. Pane spout iwe unogona kusarudza inoyerera mode, fafitera mode, uye aqua-blade maitiro. Iyo aqua-blade mode inopa yakasimba mvura jet, iyo inosvina tsvina yose kubva muhari dzako nemapani nekukurumidza. Iyi nzira yeaqua-blade ndiyo yakasarudzika nzira yausingazosangana nayo mumakomkini mazhinji musanganiswa wedhiramu. Iyi nzira yekusvina ndiyo nzira inobudirira yekugeza ndiro dzisingabatanidzwi-huru, uye yakajairika nzira yekufambisa ndiyo sarudzo yakakodzera yekuisa mapoto nemvura semuenzaniso. Nzira dzose dzemvura dzinopa basa rekuchengetedza mvura kuitira kuti hupfumire pakushandisa kwako mvura. Nenzira iyi iwe unobatsira chikamu chako kuti uchengetedze pane zvishoma zvisikwa zvakasikwa. Kunze kwezvo, iwe unozoona izvi pabhiriji rako remvura, sezvo iwe uchigona kuchengetedza kusvika pa50% pakushandiswa kwemvura pamwe nekicheni tap mixer chrome yeWOWOW.
Yakakwirira-yemhando yekicheni musanganiswa tap chrome
WOWOW yakatsaurirwa kupa yepamusoro-mhando faucets kune vatengi vayo. Ndokusaka WOWOW inoshandisa zvinhu zvinopfuura zvese maindasitiri maitiro, kunyangwe iwo eA-brand. KuWOWOW tinotenda kuti nemhando yepamusoro unogona kuita mutsauko pamusika. Kana munhu achinge awana musanganiswa wepombi yeWOWOW, iye achava mutengi weupenyu hwese. Ndokusaka tichiona vatengi vedu vachikura zuva rega rega. Iwe unoona kugona kwedu mune edu matsva ekushandisa zvakare, seNeoperl aerator uye kupedzisa kwemafesitisi ane yepamusoro yepamusoro electroplating maitiro. Tine chokwadi chekuti iwe unokwanisa kushandisa yedu yepamusoro-yekuita kicheni tapombi kwenguva yakareba.
Ndokusaka kuWOWOW isu tisingatyi kukupa iwe-yemakore mashanu waranti nguva yekicheni musanganiswa tap tap. Mazhinji faucet mhando anongopa iyo 5 -year waranti nguva. Izvi zvinoshanda kune akawanda maA-brands zvakare. Semubhadharo wemushambadzi wekicheni kazhinji unowanzogara makore mashanu kusvika gumi, kuWOWOW isu tine chivimbo chekupa iwe inopindirana yemakore mashanu-gore rewarandi nguva. Zvinogona kunge zvisinganyanye kuitika kana mukitchini musanganiswa wepombi ungatsiviwa mukati memakore mashanu mushure mekuiisa. Uye isu taizoona izvo zvisingagamuchiriki, kunyanya kubva kune vatengi vedu maonero. Nei waizofanira kubata nemhedzisiro yeizvi? Ndokusaka isu tichitsiva tapuro yekusanganisa yekubikira kuitira kuti irege kunyatsoita zvakanaka mukati memakore mashanu. Pasina matambudziko!
Dhonza pasi sipombi yekusanganisa tap
Iko kushanda-kweziso kubata kweiyo yekusanganisa yekubatanidza pini chrome ndeye yayo yekutanga kudhira-pasi kupuruzira. Unogona kunyatso dhomha pasi musoro wekutsvaira weiyi kicheni musanganiswa tap omuchini uye hose mvura hose ichaonekwa. Neiyi hose yemvura iwe unogona kusvika chero nzvimbo mukati kana kutenderera yekicheni siny yako.
Iyi hose yemvura yakagadzirwa neyakagadzika silika gel, saka iwe unovimbiswa kushanda nyore sezvo inoburitsa kunze nyore. Uye mushure mekuishandisa, inozodzosera otomatiki nekuda kweiyo ruity bhora iyo yakaisirwa isingaoneki mukicheni yako inonyura mukapu. Iyo hose yemvura zvakare yakagadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro. Nenzira iyi iwe haufanire kunetseka nezve kupfeka, kudonha kana kudonha. Iyi-in-imwe yekicheni musanganiswa wepombi chrome ichagara kune akawanda, makore mazhinji. Ndiro vimbiso yatinoda kukupa.
Shambadziro shandisa kicheni musanganiswa tap chrome
Nekuda kweiyo yepamusoro yepamusoro-soro yatinopa nekitchini yedu yekusanganisa tap chrome, iyi yekusanganisa yemukicheni inowanzo kushandiswa munzvimbo dzekutengesa zvakare. Muresitorendi nemabhawa kumusoro-kushanda kwemidziyo yekicheni kwakakosha pakuita kwayo. Kana tapuro yekusanganisa yekicheni ingadonha kunze, inogona kukanganisa bhizinesi pachayo. Naizvozvo, nzvimbo dzekutengeserana senge maresitoreti dzinongogona kuvimba nemhando yepamusoro yepamusoro. Nekuda kweizvi, kuWOWOW tinoona zvichifadza kuona kuti maresitorendi akawanda emuchina aishandisa tapuro yedu yekusanganisa yekicheni. Kuratidza kwevimbiso yemhando yatinopa.
Stylish kicheni musanganiswa tap chrome
Kunze kwekunakisa uye kushanda, kune ese ari kumba uye maresitorendi, ekitchen yekusanganisa tap yepeti inopa yakakwira mwero yekunakidza kukwezva. Munzvimbo yekutanga nekuda kweiyo yakakwira arc dhizaini iyo inosanganisa maitiro nekushanda, sezvo iwe uchiri kukwanisa kuwana nyore nyore mukicheni kunyura. Vagadziri veWOWOW vakatsaurira kupa zvivindi zviga izvo zvaizokwana mukicheni chero dhizaini. Ndokusaka WOWOW yekicheni musanganiswa tap chrome zvirokwazvo haina kufanana chero imwe musanganiswa tap. Iyo yekusanganisa yekusanganisa tap Iyo yakarongeka chiuno mutsara weiyi kicheni musanganiswa tap inonyanya kushongedza uye inopa kicheni yako mamwe mafashoni. Zvakare kana iwe uchitenderera iyo inosanganisa tap, dhizaini haizorasikirwa nekuita kwayo zvachose.
Zvese mune zvese, kicheni musanganiswa tap chrome yeWOWOW inokupa iwe kukosha kukuru kwemari iwe yaunogona kuwana mumusika. Uye pamusoro pezvose, iwe unowana chidimbu uye chakanakisa chidimbu chemishini yekukicheni icho chinokwezva chero kutarisa mukicheni yako, ingave iri pamba kana yekutengesa. Iyo yekusanganisa yekusanganisa tap inouya neyaka-makore mashanu iwarandi uye nemazuva makumi mapfumbamwe ekudzoserwa mari vimbiso. Kana iwe usingazove nekugutsikana nemusiki wekicheni musanganiswa pombi, unotenderwa kuidzosera kwatiri pasina mibvunzo yakabvunzwa. Iwe uchazowana yakazara mari zvakare. Isu tinovimba nezvigadzirwa zvedu uye tinovimba kuti muchada kicheni yedu musanganiswa tap omuchini zvakare.
Zvakanakira mukicheni musanganiswa taputa chrome mune yakapfava:
· Yakanakisa kusanganisa maficha
Maitiro matatu emvura
· Mvura-yekuchengetedza chimiro
· Stylish uye yakanakisa dhizaini
SKU: 2310700C Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Faucets Tags: Dhiza Gomo, Kicheni Sink Musanganiswa, Swivel Spout